Kaiji: The Ultimate Gambler (2009) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Kei Satō, Ken Mitsuishi, Kenichi Matsuyama, Ryushin Tei, Suzuki Matsuo, Taro Yamamoto, Tatsuya Fujiwara, Teruyuki Kagawa, Yuki Amami, Yuriko Yoshitaka
ဒီဇာတျကားကို ငယျတုနျးက မကွညျ့ဖူးတဲ့ရှားမယျထငျပါတယျ ဂပြနျဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ Death Note ထဲက မငျးသားနှဈလကျ ပါဝငျထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးပါ. imdb 6.5 အထိရထားတဲ့ ဒီကားလေးရဲ့ အညှနျးကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ Kaiji ဆိုတဲ့ ပေါ့ပေါ့နပေေါ့ပေါ့စားကောငျလေးတဈယောကျဟာ သူငယျခငျြးတဈယောကျ ပိုကျဆံခြေးတာကို အာမခံပေးလိုကျမိပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယျခငျြးက အကွှေးမပေးပဲ ရှောငျသှားတဲ့ Kaiji တဈယောကျဆီပွသာနာကရောကျလို့လာပါတော့တယျ. ခြေးထားတဲ့ ပိုကျဆံအပွငျ အတိုးတှကေ မြားပွားလို့ ပွနျဆပျဖို့ ခကျခဲလာတဲ့ အခါ လောငျးကစား သင်ျဘောပျေါကနေ အလောငျးအစားတှပွေုလုပျပီးလှတျမွောကျဖို့ ကွိုးစားရက. ပိုမိုခကျခဲလာခဲ့ပီးနောကျဆုံး အသကျနဲ့လောငျးကစားပွုရတဲ့ အထိဖွဈလာခဲ့တယျ. ဒီလိုဇာတျလမျးကောငျးကို မကွညျ့ရသေးသူမြားအတှကျ ကွညျ့ပီးသား ပွနျကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျ Blu-ray 1080p Quality နဲ့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ.
ဒီဇာတ်ကားကို ငယ်တုန်းက မကြည့်ဖူးတဲ့ရှားမယ်ထင်ပါတယ် ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Death Note ထဲက မင်းသားနှစ်လက် ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ. imdb 6.5 အထိရထားတဲ့ ဒီကားလေးရဲ့ အညွန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Kaiji ဆိုတဲ့ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပိုက်ဆံချေးတာကို အာမခံပေးလိုက်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက အကြွေးမပေးပဲ ရှောင်သွားတဲ့ Kaiji တစ်ယောက်ဆီပြသာနာကရောက်လို့လာပါတော့တယ်. ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံအပြင် အတိုးတွေက များပြားလို့ ပြန်ဆပ်ဖို့ ခက်ခဲလာတဲ့ အခါ လောင်းကစား သင်္ဘောပေါ်ကနေ အလောင်းအစားတွေပြုလုပ်ပီးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရက. ပိုမိုခက်ခဲလာခဲ့ပီးနောက်ဆုံး အသက်နဲ့လောင်းကစားပြုရတဲ့ အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်. ဒီလိုဇာတ်လမ်းကောင်းကို မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ကြည့်ပီးသား ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် Blu-ray 1080p Quality နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Option 1 storage.msubmovie.com 614 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 614 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 614 MB SD (480p)